Fihoaram-pefy amin’ny tambazotran-tserasera :: Olona iray enjehina noho ny fanaratsiana ny Papa Fransoa • AoRaha
Fihoaram-pefy amin’ny tambazotran-tserasera Olona iray enjehina noho ny fanaratsiana ny Papa Fransoa
Handray andraikitra sy hanara-maso akaiky an’ireo olona mivoy fanaratsiana sy fandrabirabiana ny Papa Ray masina Fransoa ao amin’ny tambazotran-tserasera “Facebook” ny fitondram-panjakana. Mahatsapa ireo tompon’andraikitra eo anivon’ilay rafitra misahana manokana ny ady amin’ny heloka atao amin’ny fitaovan-tserasera (Cybercriminalité) fa tafahoatra ny fanehoan-kevitra mamoafady mikasika ny fiainam-pinoana, indrindra amin’izao fiandrasana ny fandalovan’ny Papa Fransoa eto Madagasikara izao. Olona iray no efa karohina amin’izao fotoana izao noho ny fisian’izany endrika fanaratsiana any amin’ny tambazotran-tserasera izany.
“Maromaro ireo olona azon’ny fakam-panahy manao an’izany. Mety ho teny ratsy mihitsy aza no hita amin’ireny fanehoan-kevitra amin’ny tambazotran-tserasera ireny”, hoy ny kolonely Herilalatiana Andrianarisaona, lehiben’ity rafitra ity, omaly. Tsy hitazam-potsiny an’ireo fihoaram-pefy ireo io rafitra manokana eo anivon’ny minisiteran’ny serasera sy ny kolontsaina io fa handray ny andraikiny avy hatrany.
“Tsy maintsy manainga an’ireo ratsa-mangaika miara-miasa akaiky aminay izahay. Isan’izany ny eo anivon’ny polisim-pirenena sy ny zandarimariam-pirenena ary ny fitsarana mba hahafahana manenjika an’ireo mpanao heloka amin’ny fitaovan-tserasera ireo”, hoy itsy manamboninahitra itsy .
Fantatra fa olona iray no efa henjehina noho ny fanehoan-kevitra mihoapampana nataony mikasika ny Papa Ray Masina tamin’ny tambazotran-tserasera “Facebook”. Tsy niandry fitoriana avy amin’ireo voakasika ny rafitra fa tonga dia nitondra ny raharaha eo anivon’ny fitsarana.
“Satria raharaham-bahoaka ny fiainam-pinoana ka afaka miditra an-tsehatra avy hatrany amin’ny fandraisana andraikitra izahay”, hoy hatrany ny kolonely Herilalatiana Andrianarisaona. Voalaza ao amin’ny lalàna mifehy ny serasera manan-kery ankehitriny fa melohin’ny lalàna ny fivoizana hevitra miaro fanavakavaham-bolon-koditra, fiaviana, finoana…
Fampiasam-bolan’ny fanjakana :: Takian’ny Filoham-pirenena ny fanafainganana an’ireo asa maika
Tongasoa ny Papa